Mana Maree Bakka Bu'oota Yunaayitid Isteetis fundura
Kutaan poolisii biilsa mana maree bakka bu’oota Yunaayitid Isteetis odeeffannoo tika nagaa kan tarii gareen milishaa kamisa har’aa keellaa mana maree cabsanii seenuu yaalu jedhu akkaan kan qiyyaafata itti kennu ta’uu beeksise.
“Kongresii, uummataa fi poolisoota keenyaaf eegumsa godhamu mirkaneessuuf ittisa dhaabuu akkasumas humna namaa dabaluu dhaan naga eegumsa ilaalchisee fooya’ina guddaa gooneerra jedhee jira. Biilsa mana maree irra kan ga’u doorsisa kamiinuu dhaabsisuuf kutaan poolisii michoota naannoo fi federaalaa waliin hojjetaa jira jedhee jira.
Biilsa bakka kongresiin itti wal ga’u, erga Amajjii 6 deggertoonni prezidaantii yeroo sanaa kan Doonaald Traamp raawwatanii as gargaarsa waardiyyaa biyyoolessaan eegamaa kan jiru yoo ta’u naannoon sun dallaa naga eegumsaa ol ka’ee dhaabateen marfamee jira.
Jamaan, ennaa miseensonni paarlaamaa prezidaant Joo Baayiden Trampiin injifachuu isaanii raggaasisuuf wal ga’anitti cabsee ol seene.
Guyyaan kamisaa, akka falaasama garee finxaaleyyii safuutti cichanitti, kan irra deddeebi’uun sagalee guddaa argadhe waliin dha’amuu isaatiin filannoo akka ani hin jifanne ta’e jechuun kijibaan Tramp, Bitootessa 4 jechuunis guyyaa har’aa aangootti deebi’u kan itti jedhaniin wal qabata.
Guyaan kun hamma bara 1933 Amajjii 20tti jijjiiramutti guyyaa prezidaantiin Yunaayitid Isteetis hirbuu seenuun aangoo qabatu ture.
Jalqaba torban kanaa FBI fi ministriin naga eegumsa biyyoolessaa waliin ta’uu dhaan ibsa kennaniin gareen milishaa finxaaleyyii, namoonni gara Wahsingtonitti imalanii biilsa mana maree to’achuu akka yaalan jajjabbbeessuuf mari’achuu iaanii angawoota naga eegumsa naannoo akeekkachiisniiru.
Doorsisi kun miseensonni mana maree wal ga’ii isaanii har’aa akka hambisan taasise. Senetiin wal ga’uuf beellama qabatee jira. Seera tumtoonni, haleellaa Amajjii 6 dura maal quba akka qabanii fi dhaaboliin naannoo fi federaalaa attamiin deebii akka kennan ilaalchisuun wal ga’ii hedduu geggeessaniiru.
Ministriin murtii haqaa angawaa poolisii biilsa mana maree dabalatee weerara lubbuu namoota shanii galaafatetti hirmaatan kanneen jedhaman namoota 300 ol irratti himannaa dhiyeessee jira.
Ministarri Dhimma alaa Yunaayitid Isteetis Muummicha-ministaraa Itiyoophiyaa Waliin Dubbachuun Ibsame
Humnoonni Waraana Ameerikaa Sudaaniin Daawwataa Jiran